मेरा भारत महान्द्र
'तपाईं नै होइन राजेन्द्र पराजुली? तपाईंलाई हाम्रो बागले सापले याद गर्नुभको छ। कफी खाने निम्तो दिन आको हुँ म।'
दिनको एक बजेतिर एक अन्जान युवक अचानक मेरो क्युबिकल (कार्यकक्ष) मा आएर असभ्य पारामा मेचमा बस्दै मलाई भन्यो। म अवाक् भएँ। मसँग कुनै जवाफ थिएन। म चुपचाप त्यो युवकको हुलिया हेर्दै बसें। कहिल्यै नदेखेको त्यो मान्छे खाइलाग्दो शरीर र चम्किलो अनुहारको थियो।
'आजको सम्पादकीय तपाईंले लेख्नुभको रहेछ, राम्रो भाषाशैली लाग्यो तपाईंको। पत्रकारितामा तपाईंको भविष्य उज्ज्वल छ,' उसले आफ्नो पहिलो प्रश्नको जवाफै नसुनी पुनः थप्यो।
अन्जान युवकले यत्ति भनेपछि मैले ऊ आउनुको कारण थाहा पाइहालें। त्यसबखत लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासमा गोपाल बागले नामका व्यक्ति काम गर्थे राम्रै हैसियत (प्रेस, सूचना तथा संस्कृति हेर्ने जिम्मेवारी) मा। मैले उनको नाममात्रै सुनेको थिएँ, देखभेट भएको थिएन। उनी राम्ररी नेपाली बोल्न सक्छन् भन्ने पनि सुनेको थिएँ। उनको कूटनीतिक चातुर्यको प्रशंसा केही पत्रकार–प्राध्यापकका मुखबाट सुनेको थिएँ। उनी पत्रकार–साहित्यकारलाई खुसी पार्न पनि निकै सिपालु छन् रे भन्ने पनि सुनेको थिएँ।
उक्त दिन 'अलि कडा' शैलीमा लेखिएको सम्पादकीय छापिएको थियो। म काम गर्ने पत्रिका 'राष्ट्रवादी धार'को थियो। युवा उमेरको थिएँ, देशभक्त तथा राष्ट्रवादी हुनुपर्छ भन्ने भूत मेरो मस्तिष्कबाट उत्रिएको थिएन। राष्ट्रवाद, देशभक्ति, क्रान्तिकारिताजस्ता विषयले चाँडै प्रभाव पारिहाल्थ्यो। यी कर्णप्रिय शब्द भजाएर खान पल्केका राजनीतिकर्मी, विद्वान, लेखकभित्र लुकेका स्वार्थ, पाखण्ड र ढोंगबारे म अनभिज्ञ नै थिएँ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व मौलाएको समय थियो। उक्त द्वन्द्व भारतको उक्साहटमा चलिरहेको आशङ्का सर्वत्र गरिएको थियो। यद्यपि, त्यसको प्रमाण पेश गरेर उल्लेखनीय ढङ्गमा समाचार वा टिप्पणी लेख्न कसैले पनि सकिरहेको थिएन। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भारतको मलजललाई लिएर सम्पादकीय लेखेको थिएँ। 'छिमेकमा आगो लगाउँदा त्यो फैलिएर जोडिएको देशसम्म पनि आइपुग्छ होस् गर भारत, नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको आगोमा घिउ नथप, यसलाई साम्य पार्नुमै सबैको हित छन् भन्ने आशय त्यस सम्पादकीयको थियो। सोही सम्पादकीयले लैनचौरलाई पीडा दिएको रहेछ र त्यो पीडा समन गर्न राजदूतावासको पञ्जा मसम्म फैलन खोजेको रहेछ।
'भाइ, तपाईंको बागले सापलाई एक कप कफी म पनि ख्वाउन सक्छु, यतै बोलाउनोस्– म सोल्टीमा उनलाई कफी अफर गर्छु,' ती युवकलाई मैले जवाफ दिएँ। मेरो जवाफ उनलाई मन पर्ने कुरै भएन। उनी एकछिन मलाई हेरिमात्र रहे। त्यसबखत मलाई दुई कुराले भने झसँग पारिरहेका थिए।
पहिलो, सम्पादकीय मैले नै लेखेको भनेर उसले कसरी थाहा पायो र दोस्रो, मलाई चिया खाने प्रस्ताव नगरेर किन मेरो प्रिय पेय कफीकै कुरा जोडियो।'
अर्को कुरा, सम्पादकीय पत्रिकाका प्रकाशकसँगको सल्लाहमै लेखिएको थियो। बढी असर पार्ने विषयका कुनै पनि सम्पादकीय लेख्नु पर्दा प्रकाशक बिहानै फोन गर्थे। अघिल्लो दिन उनले मलाई बिहानै फोन गरेर आज अलि कडा लेख्नोस्, माओवादी र भारतको साँठगाठबारे भनेर मलाई विषय नै सुझाएका थिए, कतिपय बुँदा पनि बताएका थिए। मैले प्रकाशकको सुझावबमोजिम नै सम्पादकीय तयार पारेको थिएँ।
म लेखरचना सम्पादन गर्ने र सम्पादकीय लेख्ने कर्ममा व्यस्त थिएँ, तर क्युबिकलमा रहेको मेचबाट युवक उठ्न चाहिरहेको थिएन। उसले कम्प्युटरमा मैले लेख्दै गरेको त्यस दिनको सम्पादकीयतर्फ पनि आँखा लगाउने चेष्टा गर्‍यो। तर, मैले कम्प्युटरको स्त्रि्कन अफ गरिदिएपछि उसको प्रयत्न सफल भएन। उसले मलाई आफूसँँँगमात्रै भए पनि कफी खान जान आग्रह गरिरह्यो। मैले आफूलाई फुर्सद नभएको बताएर टारें। करिब २ घण्टापछि युवक मेरो क्युबिकलबाट बाहिरियो। जाने बेला उसले मेरो मोबाइल नम्बर माग्दा पनि नपाएपछि मतर्फ छड्के आँखा लगाउँदै बाहिरियो। तर, साँझपख उसले मलाई फोन गर्‍यो मोबाइलमै– अनुरोध तथा सल्लाहका भाषा, चेतावनीका भाषा दुवै प्रयोग गर्दै।
कसैले मेरो मोबाइल नम्बर पनि उसलाई उपलब्ध गराइसकेछन्।
'हेर्नोस् दाइ, तपाईं मेरो सल्लाह र अनुरोध मानिरहनुभएको छैन। यसको असर ठूलै पर्नसक्छ। म सीधै यो पत्रिकाको मालिकसम्म पुगेर पनि भारतबारे जथाभावी नलेख्ने बनाउन सक्छु। अहिलेसम्म म तपाईंलाई मौका दिइरहेको छु। तपाईंमार्फत नै यो काम होस् र यसको श्रेय पनि तपाईंलाई नै जाओस् अनि फाइदा पनि तपाईंलाईं नै होस् भन्ने चाहन्छु,' यस्तै अनेक कुरा गरेर ऊ मलाई मानसिक तनाव दिइरहेको थियो।
आफ्नो छेउमा कोही मान्छे आएर बस्यो भने मेरो कलम रोकिन्छ। म भीडमा वा हल्लामा काम गर्न पटक्कै सक्दिनँ। पत्रकारले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि लेख्न सक्नुपर्छ भनिन्छ, तर मेरो त्यो क्षमता कहिल्यै विकास भएन। युवक बसुञ्जेल एक अक्षर पनि लेख्न सकिनँ, सम्पादन गर्न पनि सकिनँ। म खासै दोहोरो कुरा पनि नगरी आफ्नो मेचमा बसिरहें। छेउमा मलाई मन नपरेको त्यो युवक बसिदिनाले शरीर भारी हुन थालिरहेको थियो, टाउको दुख्न सुरु भएको थियो।
'दाइ तपाईंका पनि बालबच्चा होलान्, भोलि तिनलाई अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति चाहिएला। भारतमा जत्तिको स्तरीय पढाइ अन्त कहाँ होला? तपाईंकै पनि मासिक तलब कति नै होला र ! त्यसमा यस्सो थप हुन सक्दा परिवार राम्ररी चल्न सक्ला ! उनले मलाई गजबले फकाउँदै थपे, 'तपाईंले यसरी घमण्ड गरेर के नै गर्नसक्नु हुन्छ र ! नेपालका एकसेएक पत्रकार हाम्रै समर्थक छन्, तिनको नाम हेर्नुहुन्छ?' मलाई उसको पछिल्लो वाक्यले नराम्ररी झस्कायो। 'तिनको नाम हेर्नुहुन्छ?' म भन्न सक्दिनँ उसले मलाई धम्क्याउनका लागि प्रयोग गरेको झूटो वाक्य थियो यो वा साँच्चै लैनचौरबाट भत्ता बुझ्ने पत्रकारहरूको सूची नै थियो ऊसँग' कतै मैले आदर र सम्मान गर्ने पत्रकार पनि उसले बोकेको सूचीमा त छैनन्? म झसँग भएँ र सूची नदेखाउन उसलाई भनें। ऊ त्यहाँबाट बाहिरियो। त्यो युवक आउन थालेपछिका हरेक पटकका क्रियाकलाप मैले प्रकाशकलाई बताइरहेको थिएँ। प्रकाशक मलाई 'स्यावासी' दिइरहेका थिए। उनी मेरो वफादारी र राष्ट्रवादिताप्रति नतमस्तक थिए।
युवक फेरि देखापर्‍यो सोही स्थानमा। केही दिन युवक नआएपछि सञ्चो भएको थियो। धम्क्याउन र लोभ देखाउन आएको थियो, सकेन अनि गयो भन्ने लागेको थियो। तर, उसले छाडेन मेरो पिछा गर्न। त्यस दिन ऊ अलि बढी नै आक्रोशको अवस्थामा देखिन्थ्यो। तर, पनि कुनै अशिष्ट भाषा भने प्रयोग गरिरहेको थिएन।
'तपाईंजस्ता छुसी पत्रकारले केही बिगार्न सक्दैन हाम्रो। हेर्दै जानू, हामीले भनेको नमानेको नतिजा कसरी देखापर्छ' यस्तो धम्की दिनुअघि उसले मलाई मेरा साहित्यिक पुस्तक हिन्दीमा अनुवाद गरिदिएर प्रकाशित गर्ने लोभ पनि देखाएको थियो। मेरा रचना भारतका चर्चित पत्रिकाहरूमा छापिदिने आश्वासन पनि दियो उसले। त्यसदिन ऊ क्युबिकलमा रहेको मेचमा बसेन। उभिएरै मसँग केहीबेर कुरा गर्‍यो र बाहिरियो। उसले मलाई 'छुसी पत्रकार' भनेको सन्दर्भले निकै दिन घोचिरह्यो।
अढाइ–तीन महिनापछि प्रकाशकले उनको घरमा ब्रेकफास्टको निम्ता गरे मलाई। त्यो निम्ता अन्य केही सिनियर साथीहरूलाई पनि रहेछ। म बिहान ९ बजेतिर प्रकाशकको निवास पुगेको थिएँ। विस्तारै अन्य साथीहरू पनि आउन थाले।
'अब कि हाम्रो पत्रिका बन्द गर्नुपर्‍यो कि त भारतको नकारात्मक कुरा लेख्नु भएन। बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन सबै रोकिए। त्यतिमात्र होइन पहिला छापिएका विज्ञापनका पैसा पनि उठाउन सकिएन। सबैभन्दा ठूला विज्ञापन नै रोकिएपछि अब कसरी काम गर्ने?' प्रकाशक निकै चिन्तित थिए, उनको अनुहारमा चिन्ताका रेखा दौडिरहेका प्रस्टै देखिन्थ्यो।
'पत्रिका बन्द गर्ने कुरा हुँदैन सर, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो छिमेकी निकै बलियो छ–ठूलो छ, ऊसँग हाम्रो केही लाग्दैन। त्यसैले उसको विरोध नगरी नरम कुरामात्र लेखौं,' मैले आफ्नो पालो आएपछि भनेा। म के कुरामा विश्वस्त थिएँ भने, छिमेकीसँग हामीले निहुँ खोजेर केही हुनेवाला छैन, सकेसम्म फकाएर फाइदा लिने नीति नै व्यावहारिक हुन्छ। उसका आन्तरिक विषयमा नबोल्ने–नलेख्ने, नेपालमाथि गरेका कुनै पनि गलत व्यवहारबारे लेख्दा पनि मध्यधार पक्रने। त्यसबखत मेरो कार्यकक्षमा आएको युवक र उसले गरेका कुराकानी पनि मैले साथीहरूसमक्ष राखेको थिएँ।
सबैजसो सहकर्मीले पत्रिका बन्द गर्न नहुने सल्लाह दिएका थिए त्यस दिन। पत्रिका बन्द गर्दा बेरोजगार हुने डर पनि त थियो। हामी सबैको विचार सुनेपछि प्रकाशक केही खुसी त भएका थिए, तर उनी भित्रैदेखि खुसी हुन सकिरहेका थिएनन्। उनी राष्ट्रवादका सवालमा निकै गम्भीर र भावुक थिए। सबै निस्किसकेपछि उनले मलाई एकछिन पर्खन अनुरोध गरे। उभिएरै भने, 'भारतले माओवादीलाई उचालेको कुरामा म विश्वस्त छु। तर, के गर्नु पत्रिका चलाउनै नसकिने भो राजेन्द्रजी। पत्रिका छाप्ने कागज पनि अभाव भइसक्यो। यस्तो अवस्था छ, तपाईं कुरा बुझिहाल्नु हुन्छ। मन मारेरै भए पनि अब भारतलाई महान् छिमेकी भनेर आजको सम्पादकीय पनि तपार्ईंले नै लेख्नुपर्‍यो।'
म स्वीकारोक्ति जनाउँदै कार्यालयतिर लागें। कम्प्युटर खोलेर सम्पादकीय लेख्न बसें, अहँ एक घण्टासम्म एउटै शब्द फुरेन। तर, सम्पादकीय त लेख्नैपर्थ्यो। अरु कोही साथीलाई लेख्न अनुरोध गरुँ भने पनि प्रकाशकले आफूलाई नै अर्‍हाएका छन् जबरजस्ती लेखें– भारत हाम्रो यस्तो एउटा असल छिमेकी हो जसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन। छिमेकी हुनु त यस्तो पो' यस्तै व्यहोराका शब्द र वाक्यले त्यस दिनको सम्पादकीय तयार पारें, झण्डै डेढ घण्टा लगाएर (अघिपछि आधा घण्टामा सक्थें)।
मनभित्र ठूलै उकुसमुकुस भइरहेको थियो। छातीमा कुनै गर्‍हौं वस्तुले थिचेजस्तो महसुस भएको थियो। केही समयअघि आफैंले लेखेको सम्पादकीयविरुद्ध थियो त्यस दिनको सम्पादकीय लाइन। आफ्नै कलम र पेशाप्रति निष्ठा डगमगाएको र स्वाभिमानमाथि थप्पड हानिएको अनुभूति बोकेर कार्यालयबाट बाहिरिएँ। मोटरसाइकल चलाउने जाँगर पनि चलिरहेको थिएन, विस्तारै गुडिरहेको थिएँ।
सडकमा भारतीय नम्बर प्लेटका मालबाहक ट्रकहरू लस्करै अडिएका थिए। तीमध्ये अधिकांशमा लेखिएको थियो– मेरा भारत महान्द्र।